Mpisava Lalana Tany An-tany Efitr’i Aostralia
Ho Tanteraka ny Fikasan’​i Jehovah!
“Fanomezana Tonga Lafatra” avy any Amin’​ny Ray ny Vidim-panavotana
TANTARAM-PIAINANA Naneho Hatsaram-panahy Tsy Manam-paharoa Taminay Foana i Jehovah
Mitarika ny Vahoakany i Jehovah
Iza no Mitarika ny Vahoakan’​Andriamanitra Ankehitriny?
FANTARO NY TANTARANTSIKA “Na Ratsy ny Lalana na Lavitra Be”
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Bassa (Cameroun) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Jula Kabiyè Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Lamba Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mbunda Mingrelian Mongol Mooré Motu Myama Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Otetela Ouzbek Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Indianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tongan Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Urhobo Venda Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana | Febroary 2017
George Rollston sy Arthur Willis, mijanona mba hanisy rano ny radiateran’ny fiarany. Mpisava lalana izy ireo. Faritany Avaratra, tamin’ny 1933
NISY fiara feno vovoka nandeha moramora niditra an’i Sydney, any Aostralia, tamin’ny 26 Martsa 1937. Lehilahy roa reraky ny dia no tao anatiny. Lalana 19300 kilaometatra mahery no vitan’izy ireo, hatramin’ny nialany tao herintaona talohan’izay. Nankany amin’ny faritra ngazana sady lavitra indrindra ao Aostralia ry zareo. Tsy hoe olona tia mandehandeha any amin’ny toerana mbola tsy nalehany ry zareo, fa mpisava lalana be zotom-po. Ny hitory ny vaovao tsaran’ny Fanjakan’Andriamanitra no anton-diany. Arthur Willis sy Bill Newlands no anarany.
Ny tanàna amoron-tsiraka sy ny manodidina azy no tena nitorian’ireo Mpianatra ny Baiboly * vitsivitsy tany Aostralia, hatramin’ny taona 1929 tany ho any. Fantatr’ireo rahalahy anefa fa tian’i Jesosy hitory hatrany amin’ny “faritra lavitra indrindra amin’ny tany” izy ireo, ary anisan’izany ny tany efitr’i Aostralia. (Asa. 1:8) Faritra midadasika ao afovoan-tany izy io, saingy vitsy mponina. Avo folo heny ny habeny raha oharina amin’ny haben’i Madagasikara. Be dia be àry ny asa niandry azy ireo. Nanao izay tsara indrindra vitany anefa izy ireo, sady natoky fa hanampy i Jehovah.
MPISAVA LALANA TOKOA!
Nanana kamiaonety maromaro ny fiangonana tany Queensland sy Aostralia Andrefana, tamin’ny 1929. Novan-dry zareo ho lasa hoatran’ny trano ny tao anatiny, mba hahafahana hitory tany afovoan-tany. Mpisava lalana mafy toto nahay nitondra fiara tamin’ny lalan-dratsy sady nahay nanamboatra fiara simba no nitondra an’ireo kamiaonety. Tonga tany amin’ny toerana maro mbola tsy nisy nitory izy ireo.
Nandeha bisikileta ny mpisava lalana tsy afaka nividy fiara. Izany no nataon’i Bennett Brickell tamin’ny 1932, tamin’izy 23 taona. Niainga tao Rockhampton, any Queensland, izy ary nandeha nitory dimy volana tany amin’ny faritra avaratr’i Queensland. Navesa-be ilay bisikiletany, satria nitondra boky be dia be izy sady nitondra bodofotsy sy akanjo ary sakafo. Tsy nijanona izy na dia noana aza ny pneny, satria natoky fa hanampy azy i Jehovah. Nisy fotoana tsy maintsy natosiny ny bisikiletany. Mbola nisy 320 kilaometatra anefa ny lalana, sady olona maro no efa nandeha tamin’ilay izy dia maty satria tsy misy rano any. Nahavita ana hetsiny kilaometatra eran’i Aostralia ny Rahalahy Brickell, nandritra ny 30 taona taorian’izay. Nandeha bisikileta sy môtô ary aotomobilina izy tamin’izany. Izy no voalohany nitory tamin’ireo tompon-tany aostralianina. Noho ny fanampiany, dia lasa nisy fiangonana vaovao maromaro tany amin’ilay tany efitra. Lasa be mpahalala sy nohajain’ny olona tany koa izy.
NAHAVITA NIATRIKA ZAVA-TSAROTRA
Vitsy ny mponina ao Aostralia raha oharina amin’ny velaran-taniny. Any amin’ny faritra ngazana no tena vitsy olona. Niezaka mafy àry ireo rahalahy sy anabavy mba hitory tany amin’ny faritra lavitra.
Izany no nataon’i Stuart Keltie sy William Torrington. Namakivaky an’i Simpson, tany efitra midadasika sy feno dongom-pasika, ireo mpisava lalana ireo tamin’ny 1933, mba hitoriana tany Alice Springs, any afovoan’i Aostralia. Simba ny fiara kelin’izy ireo, dia tsy maintsy navela, nefa nanohy nitory foana izy ireo. Nandeha foana koa ny Rahalahy Keltie, na dia nanao solon-tongotra hazo aza. Rameva indray no notaingenany. Nisy vokany ny ezaka nataon’izy roa lahy. Nitory tamin’ny tompona hotely iray izy ireo tao William Creek, tanàna fijanonan’ny lamasinina. Charles Bernhardt no anarany. Nanaiky ny fahamarinana izy tatỳ aoriana, dia namidiny ny hoteliny. Nanao mpisava lalana irery tany amin’ny faritra faran’izay ngazana sy mitokana any Aostralia izy, nandritra ny 15 taona.
Arthur Willis, manomana ny entana hoentiny mitory any an-tany efitr’i Aostralia.—Perth, any Aostralia Andrefana, tamin’ny 1936
Tsy maintsy be herim-po sy fikirizana ireny mpisava lalana talohaloha ireny, satria betsaka ny zava-tsarotra. Tena nila an’izany i Arthur Willis sy Bill Newlands, voaresaka tany aloha. Avy be ny orana indray mandeha, dia namotaka be tany amin’ilay tany efitra nalehan’izy ireo. Tapa-bolana ry zareo vao nahavita 32 kilaometatra. Tsy maintsy nanosika ny fiarany tamin’ny dongom-pasika avo be ry zareo indraindray. Tera-tsemboka mihitsy ry zareo tamin’izany satria nigaingaina be ny andro. Tsy maintsy namakivaky lohasaha feno vato sy renirano ritra rakotra fasika koa izy ireo. Isaky ny simba ny fiarany, dia nandeha an-tongotra na bisikileta andro maromaro izy ireo mandra-pahatongany tany amin’ny tanàna akaiky indrindra teo. Niandry herinandro maromaro ry zareo avy eo vao tonga ny piesy nilainy. Tsy kivy mihitsy anefa izy ireo. Namerina an’izay voalazan’ny gazety Fotoam-pahasambarana i Arthur Willis, ka niteny hoe: “Na ratsy ny lalana na lavitra be, dia mandeha foana ny vavolombelon’i Jehovah!”
Mpisava lalana efa ela be i Charles Harris. Nilaza izy fa na dia irery aza izy tany an-tany efitra ary mafy ny fiainana, dia vao mainka izy lasa akaiky kokoa an’i Jehovah. Hoy koa izy: ‘Mahafinaritra kokoa ny fiainana raha kely araka izay azo atao ny fananana. Vonona ny hatory teny an-kalamanjana i Jesosy raha nilaina izany. Tsy tokony hampaninona antsika koa izany, raha mila manao an’izany isika any amin’izay anendrena antsika.’ Izany no nataon’ny mpisava lalana maro. Olona maro no nandre ny vaovao tsara sy lasa mpanompon’i Jehovah, noho ny ezaka mafy nataon’izy ireny.
^ feh. 4 Lasa nantsoina hoe Vavolombelon’i Jehovah ny Mpianatra ny Baiboly nanomboka tamin’ny 1931.—Isaia 43:10.
NY TILIKAMBO FIAMBENANA—FIANARANA Febroary 2017
“Mahita Vokatra Aho ka Midera An’i Jehovah”
“Iza no Nanankinana An’ilay Asa?”